Namuhla, impisi Japanese kubhekwa ngokusemthethweni yokuqothulwa. Kuyadabukisa, kodwa manje kuyabonakala kuphela izithombe ezindala noma phakathi nemibukiso Museum. Kodwa kunezikhathi lapho izilwane ezidla ezinye inkululeko ngeqholo kancane endlwaneni emhlabathini Japanese. Okwenzeka kubo? Kungani engakwazanga ukuphila kuze kube namuhla? Futhi ngubani obangela le nhlekelele?
Izimpisi isiko Japanese
BaseYurophu zijwayele uyakubona abesabekayo impisi nomzingeli ukuthi ngaphandle emthunzini ukuhlaselwa ukungabaza ubani ongalokotha ukuma endleleni yakhe. Yingakho besaba ngakho ukutholakala kwalezi zilwane bese uyazama ukuwachitha lapho nje kuvela ithuba kancane. Nokho, impisi Japanese livela kithi ngendlela ehlukile ngokuphelele.
Ngakho, ngokusho legend basendulo babengazi, lokhu isilwane kwaba owumthombo umoya ehlathini. Lokhu nomzingeli hhayi kuphela bavikele izwe labo emademonini okubi nezenzo, kodwa futhi lisebenzisane indoda. Ngokwesibonelo, abantu basendulo babekholelwa ukuthi impisi Japanese esesizile abahambi elahlekile ukuthola indlela yabo ekhaya. Yingakho-Japanese zivame ethulwa yokudumisa Izisulu zala izilwane, ukuze basuke njalo kwabavikela.
Ngaphezu kwalokho, kukhona inguqulo othi izinto eziphilayo kwezimpisi wahogela le nhlekelele lusondela. Ngezikhathi ezinjalo, bona Hewulani benanela yonkana County ukuze baxwayise abantu ngokuthi enkingeni esondelayo emkhathizwe.
Japanese nezimpisi emehlweni ososayensi
Okwamanje, ososayensi abakwazi ukusho nini nezimpisi ziye kuxazululwe phezu iziqhingi Japanese. Thembeke ke yaziwa nguwe kuphela yokuthi okhokho bawo zazivela emazweni-Mongolian. Lokhu kufakazelwa ufuzo zabo ukuthi% 6 kuphela zofuzo sihluke igazi labo bazalwane.
Ngaphandle-Japanese, nabo babehlala eziqhingini eziseduze, ezifana Kyushu, Honshu, Shikoku, futhi Wakayama. Thanda zaseYurophu, abahlukumezi Japanese ayethanda ukuba axazulule eduze emizaneni nasemadolobheni amancane. Lokhu zingachazwa ngezinqubo yokuthi lapha nezimpisi lalingabulawa kalula ukuthola ukudla, abantu kulahliwe.
Ngesikhathi esifanayo kwi insimu banamuhla Japan wahlala ezimbili zenyathi lezi ezilwaneni ezidla ezinye izilwane. Lokhu impisi Ezo futhi hondosskie nezimpisi Japanese. Futhi uma kuqala kwaba ummeleli evamile Canine, wesibili kwakuhluke kakhulu kulokho nozakwabo zamanje.
Wolf Ezo: ukubukeka nezimbangela yokuqothulwa
igama Okuningi ezivamile lokhu zenyathi - Hokkaido Wolf. Lokhu nomzingeli akuyona okuningi ezahlukene kusukela zaseYurophu, kwaba yindlalifa ngqo amasiko abo futhi imikhuba. Ngokwesilinganiso, ukukhula kwalezi zilwane akuvamile kweqe umkhawulo ka-130 cm. Kodwa ngisho kanjalo, base omunye izilwane ezidla ezinye enkulu esiqhingini.
Njengoba kushiwo ngaphambili, impisi Japanese kwaba isilwane wayelihlonipha futhi wamphatha ngenhlonipho enkulu. Nokho, ekupheleni kwekhulu XIX isimo sesishintshile kukho okubi. Lapho kufika kombusi Mutsuhito ngaphezulu kanye nezwe sasetshenziswa izidingo zabalimi nabanikazi bemihlaba. Futhi njengoba izimpisi kungaba usongo olukhulu kubo, uhulumeni wakhipha umyalo wokuba owawuthi ngecala lokubulala lezi izilwane ezidla ezinye umvuzo.
Lokhu kwaholela ekutheni iqiniso lokuthi abafisa imali kokufa izilwane abampofu kwakungekho ukukhululwa. Futhi ngakho, ngo-1889 impisi lokugcina Ezo wabulawa abazingeli. Futhi ngemva kwamakhulu kuphela kamuva abantu waqala ukucabanga ukuthi iyiphi indlela ezinesihluku ngezinye izikhathi ingaba umthombo.
Wolf hondossky - zenyathi Japanese nomzingeli
Lokhu zenyathi nezimpisi wahlala esiqhingini Shikoku, Kyushu, Honshu, futhi kwezinye izifundazwe of Japan. Kusukela umuntu wakubo mncane ngobukhulu umzimba, okuyinto engavamile kakhulu nezimpisi. Kodwa naphezu kwalokhu, lolu umhlaseli kwaba imisipha kakhulu evuthiwe, okuyinto kwavuzwa ukukhula kwakhe okuncane.
Inkinga eyinhloko kwaba nenani elincane hondosskogo zinhlobo impisi. Ngakho lapho ngo-1732 insimu ka iziqhingi Japanese lwavutha amarabi ukugqashuka, iningi lezi zilwane wafa. Ezinye izindaba zika-labantu abashone, njengoba ayenjalo ingozi kubo. Ngokusho izibalo ezisemthethweni, impisi zokugcina hondossky wabulawa ngo-1905 eduze esifundazweni Nara.
Ikhumbula ezintsha e-genetic engineering, kunethemba lokuthi ezinye izinto eziphilayo uzothola elinye ithuba khona. Ososayensi bakholelwa kulokho maduzane bazokwazi clone lezo zidalwa kabani DNA banayo database ngempela.
Kepha impisi Japanese, sibonga imizamo Hideaki Tojo ufuzo yabo libuyiselwe ngokuphelele. Kwenzeka inqaba, usosayensi abanamakhono wakwazi ukufeza le besebenzisa ucezu amancane kwezicubu, okuyinto ngasinda ngokuyisimangaliso namuhla. Ngakho, kuze kube phakade nezimpisi Japanese ivuke kwabafileyo futhi uthathe indawo yabo efanele eduze indoda.
Isikhathi lapho izimbali cherry, amaJapane obusiswé ukubedlula
I-carp crucian odlayo, lapho uhlala futhi kanjani ukubheka?
I-feat enkulu ye-Prometheus
Ukuhlaziywa kwe-inkondlo "ngiphuma wedwa endleleni": izici uhlobo, isihloko kanye umqondo umsebenzi
Residency futhi Internship: umehluko. Uyini umehluko